Waxqabadka Neymar Jr ee Kooxda Paris Saint-Germain oo ka wanaagsan kiisii Barcelona… (Rikoorradan ayaa kuu caddeynaya) – Gool FM
(Paris) 29 Jan 2020. Neymar Jr ayaa ku nool maalmihiisii ​​ugu fiicnaa ee Paris Saint-Germain tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Barcelona sanadkii 2017, iyadoo rikoorradiisa garoonka Parc des Princes ay muujinayaan inuu ku soo bandhigayo PSG qaab ciyaareed ka wanaagsan kii uu ku soo bandhigay Blaugrana.
Sida lagu xusay warbixin lagu daabacay wargeyska “Marca” ee dalka Spain Neymar Jr ayaa wuxuu ka qeyb qaatay 101 gool oo ay dhalisay kooxda Paris Saint-Germain tan iyo imaatinkiisa sanadkii 2017, wuxuu dhaliyay 66 gool, wuxuuna caawiyay 35 gool oo kale ay dhaliyeen saaxiibadiis kooxda, kaddib 75 kulan uu kaga soo muuqday maaliyada PSG.
Neymar Jr ayaa gaaray in cel celis ahaan uu gool u dhaliyo kooxdiisa Paris Saint-Germain 0.88 kulankiiba, halka gool caawintiisa cel celis ahaan ay gaartay 0.46 kulankiiba.
Si kastaba ha noqtee, cel celiska gooldhalineed Neymar Jr ee kooxdiisii hore Barcelona ayaa gaarsiisnaa 0,56 kulankiiba, halka cel celiska gool caawintiisa uu gaarsiisnaa 0.4.
Yeelkeede, Neymar Jr ayaa wareysi uu horey u bixiyay wuxuu ku cadeeyay inuu diirada saarayo Paris Saint-Germain, wuxuuna muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu kooxda gool u dhaliyo isla markaana uu caawiyo.
Laacibkan reer Brazil ayaa wuxuu xilli ciyaareedkan kooxdiisa Paris Saint-Germain u dhaliyay 15 gool, 17 kulan uu ciyaaray, waxayna cel celis ahaan gaarayaan shuudadkii uu tuuray kowooda guuleystay ee goolal isku badelay 56%.